ninka aduunka ugu buuran oo markii ugu horaysay dibada u soo baxay: wardoon.tripod.com
ninka aduunka ugu buuran oo banaanka u soo baxay
Markii ugu horeeysay shan sano ka dib ayuu ninka ugu cayilan aduunka ee u dhashay dalka Maxico u soo baxay banaanka si uu helo diirnaan dhanka qoraxda.
Manuel Uribe ayaa la sheegay in culeyskisa yahay 560- Kgm ayaa markii uu soo baxay waxaa si weyn u soo dhaweeyay dariskiisa oo si weyn u xiiseynayay iyadoo ay la socden koox Music u garaacda. Uribe oo 41-sano jir ah ayaan awoodin in uu ka kaco sarirta uu ku jiifo iyadoo sariirta uu saaran yahay ay wadaan lex nin oo aad u xoogan.
"Farxad ayaa i hareeysay markii aan arkay Uribe oo ileyska qoraxda arkay , hadii aan aniga sano badan aan ka soo bixin guriga waan waalan lahaa", sidaa waxaa yiri mid ka mdi ah dadka la dariska ah . Uribe ayaa sanadihii uu soo qaan gaarayay waxa u gaarayay 113-Kgm iyadoo sanadkii 1992-dii uu bilaabay in cayilkiisa uu sii kordho , waxa uuna sanadkii 2002-da noqday in sariirta uu ka soo kici waayo .
Isaga oo saxafiyiinta la hadlayay waxa uu sheeegay in uu ku rajo weyn yahay in isaga kaligii uu isku filnaado cayilkana ka yaraado waxa ayna taqaatiirta leeyihiin sanado badan ayuu u baaha yahay in lalatacaalo.